Ny lahatsary amin'ny Chat Mandresy "Lahatsary Mampiaraka" Vokatra ny Taona Loka Miresaka Fusion
Ny lahatsary amin’ny Chat Mandresy «Lahatsary Mampiaraka» Vokatra ny Taona Loka Miresaka Fusion
**HAVAOZINA aogositra,**ankoatra ny «Video Mampiaraka» Vokatra ny Taona, ny Lahatsary amin’ny Chat vao atao hoe Fifandraisana Vahaolana Vokatra ny Taona amin’ny alalan’ny Teknolojia-Barotra Fikambanana. Tao anatin’ny herinandro vitsivitsy satria ny fanokafana ofisialy, ny Lahatsary amin’ny Chat dia tsy hoe efa lasa ambony ny fifandraisana fandaharana ao amin’ny firenena manerana izao tontolo izao dia manana fomba ofisialy naka ny teknolojia izao tontolo izao amin’ny tafio-drivotra. Ny lahatsary amin’ny Chat dia nahazo ny loka «Lahatsary Mampiaraka» Vokatra ny Taona mari-pankasitrahana avy amin’ny Teknolojia Barotra Corporation (TMC), an-tserasera-barotra ny mpitarika tamin’ny taona lova ny fanajana ny teknolojia ireo orinasa manerana izao tontolo izao.
Jonathan Chen dia faly ny mandray ny iray amin’ireo tena hajaina ny voninahitra ao amin’ny serasera teknolojia orinasa. Ho azy ireo, ny tsy mitsaha-mitombo fahombiazana ny Lahatsary amin’ny Chat dia fanamafisana ny asa mafy sy fahafoizan-tena Miresaka Fusion manontolo IZANY ekipa. Dr.
«Ny foto-kevitra momba ny «Video Mampiaraka» efa mitovy voalohany faniriana lalina momba ahy toy ny Internet ny tenany — toy izany koa ny onjam-revolisionera mety, » hoy ny Dr.
Lahatsary Mampiaraka» dia tsy manova ny fomba fifandraisan’ny olona sy ny ao amin’ny Internet, izany dia tsy manova ny fomba fifandraisan’ny olona sy ny fe-potoana. «TMC koa dia variana Miresaka Fusion ny fandraisana anjara amin’ny fampandrosoana ny «Video Mampiaraka» orinasa. «Ny mpandray maintsy aseho fangadiana zava-baovao ao amin’ny Lahatsary «Fiarahana» toerana ary manantena ny hahita ny hoavy successes, » hoy i Erik Andalana, TMC Vondrona Talen’ny Famoahana. Ny lahatsary amin’ny Chat ny fanatanterahana no vao ny fanombohany fotsiny. Miresaka Fusion tsy manana fikasana ny miadana. Maka Lahatsary amin’ny Chat ho an’ny iPhone na Android amin’izao fotoana izao ary vonona ny mampientam-po ny ho avy mialoha
← Mahita ao amin'ny Instagram renirano
Amin'ny chat miaraka amin'ny ankizivavy tsy misy fisoratana anarana →